Exodus 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Atemmusɛm a ɛwɔ hɔ ma Israel (1-31)
Korɔnbɔ ho mmara (1-4)
Obi a ɔbɛsɛe obi afuw mu nneɛma (5, 6)
Obi ade a akodi obi hɔ ne ade no wura (77-15)
Bradato (16, 17)
Ɔsom ne abrabɔ mu nsɛm (18-31)
22 “Sɛ obi wia nantwi anaa oguan na okum no anaasɛ ɔtɔn no a, ɔde bi besi ananmu. Sɛ ɛyɛ nantwi a, ɔde anantwi anum besi ananmu, na sɛ ɛyɛ oguan nso a, ɔde nguan anan besi ananmu.+ 2 (“Sɛ ɔkorɔmfo+ bɔ wura obi fi sɛ ɔrekowia ade na wɔbɔ no ma owu a, nea ɔbɔɔ no no renni mogya ho fɔ. 3 Nanso sɛ ɔbae no, na owia apue a, ɛnde nea ɔbɔɔ no no bedi mogya ho fɔ.) “Ɛsɛ sɛ ɔhyɛ ananmu. Sɛ onni hwee a, ɛnde wɔbɛtɔn no de atua nea owiae no ka. 4 Sɛ wohu aboa a owiae no wɔ ne nkyɛn na sɛ aboa no nwui a, nantwi oo, afurum oo, oguan oo, ɔbɛbɔ ho abien ahyɛ anan. 5 “Sɛ obi de ne mmoa kɔ adidi, na sɛ ogyaa wɔn ma wɔkɔwe ne yɔnko afuw mu nneɛma anaa wɔkɔsɛe ne bobefuw* a, ɛsɛ sɛ ɔde nnɔbae a eye paa wɔ n’ankasa afuw anaa ne bobefuw mu hyɛ anan. 6 “Sɛ obi sɔ ogya na ɛtrɛw kɔtɔ nsɔe mu, na sɛ ɛhyew obi hwiit* a watwa agu hɔ anaa nea esisi hɔ anaa ɛhyew afuw bi a, nea ɔsɔɔ ogya no, ɛsɛ sɛ otua nea ahyew no ho ka. 7 “Sɛ obi de sika anaa nneɛma bi ma ne yɔnko sɛ ɔmfa nsie na obi kowia fi ne fi na wɔkyere ɔkorɔmfo no a, ɔkorɔmfo no bɛbɔ ho abien ahyɛ anan.+ 8 Sɛ wɔanhu ɔkorɔmfo no a, wɔmfa ofiwura no mmra nokware Nyankopɔn no anim+ na wɔnhwɛ sɛ ɛnyɛ ɔno ara na wafa ne yɔnko no nneɛma anaa. 9 Bere biara a wɔbɛbɔ obi sobo sɛ wafa obi ade no, ɛyɛ nantwi oo, afurum oo, oguan oo, ataade oo, biribiara a ayera a obi behu aka sɛ, ‘Ɛyɛ me de’ no, wɔmfa wɔn baanu asɛm no mmra nokware Nyankopɔn no anim.+ Nea Onyankopɔn bɛka sɛ odi fɔ no, ɛsɛ sɛ ɔbɔ ho abien hyɛ ne yɔnko no anan.+ 10 “Sɛ obi de n’afurum anaa ne nantwi anaa ne guan anaa n’afieboa bi ma ne yɔnko sɛ ɔnhwɛ so na aboa no wu anaa opira anaa obi kyere no na obiara anhu a, 11 ɔnka ntam wɔ Yehowa anim nkyerɛ aboa no wura sɛ ɔmfaa ne nsa nkaa ne yɔnko no biribiara. Ɛba saa a, ɛsɛ sɛ aboa no wura no gye tom; ɛnsɛ sɛ ne yɔnko no tua bi hyɛ anan.+ 12 Nanso sɛ obi na ɔbaa ne hɔ bewiaa aboa no a,* ɛnde ɔmfa bi nhyɛ ne wura no ananmu. 13 Sɛ wuram aboa na ɔtetew ne mu a, ɔmfa mmra na ɛnyɛ adanse. Nea aboa bi atetew ne mu de, ɛnsɛ sɛ otua ho ka. 14 “Na sɛ obi kɔsrɛ aboa bi fi ne yɔnko hɔ na aboa no pira anaa owu bere a ne wura no nni hɔ a, ɛnde ɛsɛ sɛ nea ɔkɔsrɛɛ aboa no tua ho ka. 15 Sɛ esii wɔ ne wura anim a, ɛnde ɔrentua ho ka. Na sɛ aboa no wura no de no maa ahan a, esiane sika a ɔde too ase no nti, ɔrentua biribi foforo biara nhyɛ anan. 16 “Sɛ obi yɛ ɔbaabun a obiara mfaa n’ano ntoo no so na sɛ ɔbarima bi to no brada ne no da a, ɛsɛ sɛ ɔbarima no tua ne tiade na ɔware no.+ 17 Na sɛ ababaa no papa si no pi sɛ ɔrempene mma ɔbarima no nware ne ba no mpo a, tiade sika no de, ɛsɛ sɛ ɔbarima no tua. 18 “Mma ɔbea sumanni biara nntena nkwa mu.+ 19 “Obiara a ɔne aboa bɛda no, ɛsɛ sɛ wokum no.+ 20 “Obiara a obefi Yehowa akyi akɔbɔ afɔre ama onyame foforo no, wonkum no.+ 21 “Nteetee ɔhɔho na nhyɛ no so,+ efisɛ mo nso na moyɛ ahɔho wɔ Egypt asaase so.+ 22 “Monnteetee okunafo anaa agyanka.+ 23 Sɛ moteetee no na osu frɛ me a, ɔkwan biara so metie ne sufrɛ;+ 24 na m’abufuw bɛdɛw, na mede sekan bekunkum mo ama mo yerenom ayɛ akunafo na mo mma ayɛ nnyanka. 25 “Sɛ mobɔ me nkurɔfo a ahia wɔn* no bosea a, monnyɛ mo ho sɛ wɔn a wɔbɔ nkurɔfo bosea de pɛ mfaso bɔne no. Mommfa nsiho biara nnka ho.+ 26 “Sɛ wo yɔnko bɛbɔ wo hɔ bosea na sɛ ɔde ne ntama si awowa a,+ san fa n’ade kɔma no ansa na ade asa. 27 Ntama a ɔwɔ ara nen, na ɛno na ɔde kata ne ho. Sɛ ne nsa anka a, dɛn na ɔde bɛda?+ Sɛ osu frɛ me a, metie, efisɛ mewɔ ayamhyehye.*+ 28 “Nka Onyankopɔn ho abususɛm,+ na nnome wo man mu panyin.+ 29 “Ntwentwɛn wo nan ase sɛ wode wo nnɔbae bebrebe ne wo nsã anaa wo ngo a abu so no bi bɛbɔ afɔre.+ Fa wo babarima panyin ma me.+ 30 Saa ara na ɛsɛ sɛ woyɛ wo nantwi ne wo guan abakan:+ Ma ɔntena ne maame ho nnanson. Na da a ɛto so awotwe no, fa no ma me.+ 31 “Monyɛ ɔman kronkron mma me.+ Aboa biara a wuram aboa bɛtetew ne mu no, ɛnsɛ sɛ mowe ne nam.+ Montow mma nkraman.
^ Ɛbɛyɛ sɛ hwɛ a wanhwɛ so yiye nti na ɛbaa saa, anaa anka obetumi ayɛ tebea no ho biribi.
^ Anaa “wɔn asɛm yɛ mmɔbɔ.”
^ Anaa “meyɛ ɔdomfo.”